BE စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် China Cable ကိုလက်ဖြင့်ထိတွေ့သည့်လက်သုတ်ပုဝါများကိုထိန်းချုပ်သည် တကယ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်အလှကုန်အရိုးစု adapter connector ကိုအတူ
ထုတ်ကုန်အလေးချိန် ၂၆၀ ဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ၁။ လက်ချောင်း ၃ ချောင်း ၅ ခုရနိုင်သည်။
3. လက်ကောက်ဝတ်အဆစ် passively လှည့်နိုင်ပါတယ်။
4. Poke တံတောင်ဆစ်လက်ကိုင်အဆစ်တံတောင်ဆစ်အဆစ် passively တိုးချဲ့နှင့် flex စေနိုင်သည်
ပခုံး disarticulation များအတွက်သင့်လျော်သော 6. ။
ခြေတုအစိတ်အပိုင်း: adapter connector ကိုနှင့်အတူအလှကုန်အရိုးစုလက်
ထုတ်ကုန်အမည် BE အတွက်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် ၂၆၀ ဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ၁။ လက်ချောင်း ၃ ချောင်း ၅ ခုရနိုင်သည်။ ၂။ လက်၏လုပ်ရပ်အားကေဘယ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ 3. လက်ကောက်ဝတ်အဆစ် passively လှည့်နိုင်ပါတယ်။ 4. လက်ကောက်ဝတ် disarticulation နှင့်လက်ဖျံ၏အလယ်တန်းတိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောငုတ်များအတွက်သင့်လျော်သော။
အသုံးပြုမှု ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအပေါ်ပိုင်းခြေလက်အင်္ဂါသည်လက်ကောက်ဝတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လက်ဖျံဖြတ်တောက်ခြင်း၊တံတောင်ဆစ်ပူးတွဲဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အထက်လက်မောင်းဖြတ်တောက်ခြင်း။ အချို့သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်လူနာများအားဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ဘောပင်တစ်ချောင်းဖြင့်စာရေးခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်, က၌တည်ရှိ၏လက်မ, လက်ညှိုးနှင့်အလယ်လက်ချောင်းပေါင်းစပ်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အနေအထား။ အရာဝတ္ထုကောက်နေသည့်အခါ
traction cable ကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့်လက်ကိုဖွင့်ပြီးနွေ ဦး ရာသီ၏ torsion အားဖြင့်လက်ကိုပိတ်နိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုး
4. ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း: T / T၊ Western Union, L / C ။
ရှေ့သို့ ကလေးတစ် ဦး ဝင်ရိုးတင်ပါးဆုံရိုးအဆစ် 7E7-S
နောက်တစ်ခု: adapter connector ကိုနှင့်အတူအလှကုန်အရိုးစုလက်
200mm / 400mm ပြွန်ကိုပေါင်းစပ်
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာသိုလှောင်စွမ်းအင် sach ခြေလျင်